Shil Baabbur oo aad uu Fool xun oo ka dhacay Cundhufa iyo dhibta ka jirta Galbeedka Gobolka Sitti. – Xeernews24
Shil Baabbur oo aad uu Fool xun oo ka dhacay Cundhufa iyo dhibta ka jirta Galbeedka Gobolka Sitti.
10. November 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Marka hore waxaan tacsi tiiraanyo iyo murugi leh u tireynaa shacabka magaaladda Candhuufa dhamaatiin gaar ahaan qoysaskii iyo heladii ay ka baxeyn dhalintii ku geeriyootay shilkii gaadi ee maanta ka dhacay magaaladda Cuna.
Wararka Naga Soo Gadhay Magalaadda CUNA ee loo yaqaano Candhuuf war xanuun iyo tiraayo badan oo sheegaya in uu magaalada ka dhacay Saaka markay saacaddu ahayd 11 kii Aroornimo shil gaadhi oo keystay dhimasho aad u foolxun oo ay qudhwaayeen 5 wiil oo dhalin yara ah. Halkaa waxa kale oo dhawaac ku gaadhay 3 wiil oo ka mid ahaa kuwa halkaa ku geeriyooday. Dhalinta ayaa ayagu la socday gaadhi nuuca loo yaqaan Bajaajka sarnaa marka uu shil ku yimi. Wararka naga soo gaadha dhinaca magalaadda Cuna ayaa sheegaaya in Bajajka dhalintu saarnaayeyd u gaadhi xamuulka qaada si toos ah u duqayey waana sababta keentay inay halkaa ku geeriyootaan 5 qof iyo 3 dhaawaca oo ayaga. Dhimashadan waxaa sabab u ahaa gawaadhidda waa ween ee xamulka ee isjiidka loo yaqaano una kala gudba wadadda isku xidha Jabuuti iyo dalka Itoopiya. Shilka oo kale maaha mid ugub ah oo la odhan karo waa arin cusub balse waa wax yaaladda ugu waa wayn ee dhibta ku haya ummadda ku dhaqan deganka . Arimaha murugtale ee sidda xad dhaafka ah ugaga yimaadda ummadda u dhibaatooyin fara badan ku haya shacabka galbeedka gobolka Sitti. Tan iyo waqti dheer ayuu shacabka ku nool galbeedka sitti ee beesha ciise si isdaba joogga waxaa ku haya dhibka kaaga yimaadda dhinaca gawaadhidda xamuulka oo ayagu u keysta ummadda galbeedka Sitti ee beesha ciise dhibaato si xad dhaaf ah oo is daba joogah. Shilalka noocan oo kala ah ayaa keyna inta badan wax yeelayn aan la koobi karayn oo mararka qaar koodna dirawaladda keysta shilalka inay isku dayaan inay baxsadaa oo kacanta lagu dhingi waayo. Dhinkaa uma kala soocno inay ku naf waayaan dad iyo duuyaba. Shilkan saaka ka dhacay magaaladda Candhuuf ayaa isagu ah midkii ugu tiradda badanaa inay ku geeriyoodaan ama ku qudh waayaan 5 ruux oo dhalin yara ah. Shacabka ku nool degaanka ee xoolo dhaqatadda Beesha Ciise ayaan isagu ku nool dhibka is taba joogga ah ee nooca noo kalaha. Degmadda Cuna ayaa ku taal ah marinka dekadda badeecad nooleedka dalka Itoopiya oo ayadu isku xidha dalka Jabuuti iyo daka Itoopiya. Gawaadhida aadka ugu tira badan oo lagu qiyaasi karo 5000 oo kuwa Isjiid loo yaqano ayaa maalin iyo habeen si taxana ah uga kala gudba wada aad u dheer. Taas waxay u keentaa dirawaladda inay kala kulmaan daal ku lugle abood foojignaan daro ah. Arimaha nooca oo kala ah ayaa waxay ku hayaan shacabkaa iyo dhaqaaqiilka aduunyo ee ay leeyihiin inay ku duumaan dhibaa tooyinka ka soo gaadhayaa gawaadhidu iyo dirawaladda. Sababahan oo kaley ayaan lagu tilmaami kara oo la odhan karaa waxaa keena dhawr arimood oo lagu tilmaamo ka war qabid la aanta ka jirta dhulka quumiyadda beesha ciise ee ku dhaqan degmooyinka uu degan yahay shacabka. 1- Majirto cid la xisaabtanta oo ka hortega dhibaatooyinka noocan u xilsaran dhinaca amaaka shaqayta ama koormeerka hilaaladda hab u socodka gawaadhidda . 2- Dirawaladda ayaa iyagu u wada gawaadhidda si xad dhaaf ah oo mashaqa daal ah oo keysta dhimashadda fara badan. 3- Ma jirto dhinac yadda wadadda wax astaamo tilmaamaaya oo digniin laxidhiidha inuu yahay degaanku degaanadda xoolo dhaqata oo ay ku nooshahay dadka baadiya xoolo dhaqatadda. Khasaaraha faraha badan ee soo gaadhayaa shacabka qaranka beesha ciise majirto wax la qaybtama oo ka caawiya siddii xal waarta ah loogu heli lahaa.Wana ta ugu horeysa dhibka ku saabsan daryeel laanta ummadda degaanka iyo duuyadeedda. Waxaa niisoo gudbin doona waqtiyadda nagu soo aadan wixii warar iyo sawira naga soo gadha degaanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/special-raport.jpg 576 1021 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-10 08:48:422017-11-10 08:59:07Shil Baabbur oo aad uu Fool xun oo ka dhacay Cundhufa iyo dhibta ka jirta Galbeedka Gobolka Sitti.
Waa Imisa Tirada Dawladaha Dunidu? Jabuuti oo qaybti shanaad u dirtay Soomaaliya